Amazing Archives - Page2of 34 - Shwe Khit Online TV
October 7, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှေးအကျဆုံးရယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အရာ၀တ္တုတွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုအရာတွေက သက်တမ်း ရှေးအကျဆုံး ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Jack Hills Zircon ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဩစတေးလျနိုင်ငံ ၊ Jack Hills တောင်ကုန်းတွေမှာ တွေရှိခဲ့တဲ့ Zircon အမည်ရှိ […]
အချိန်ခရီးသွား လို့ ယူဆရတဲ့ ထူးထူးခြားခြား လူ (၅) ဦး
October 2, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီ တစ်ခါမှာတော့ အချိန်ခရီးသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ။ အချိန်ခရီးသွားခြင်းဆိုတာကို ယနေ့အချိန်အထိ သိပ္ပံနယ်ပယ်တွေမှာ အကြိတ်အနယ် ငြင်းခုံနေကြဆဲ ဖြစ်ပြီး ပညာရှင်တွေ ကြားမှာလည်း မတူညီတဲ့ အမြင်ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ခရီးသွားခြင်းဆိုတာ တစ်ကယ်လားဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ( ၁၆၇၀ ) ခုနှစ်က ပန်းချီကားထဲ ပါခဲ့တဲ့ […]
ရုပ်ရှင်ထဲမှာနဲ့ တစ်ကယ့်အပြင်မှာ ကွဲလွဲနေတဲ့ ပင်လယ်ဓားပြများ အကြောင်း
September 30, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါမှာတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာနဲ့ တစ်ကယ့် အပြင်မှာ အနည်းငယ် ကွဲလွဲနေတဲ့ ပင်လယ်ဓားပြများ အကြောင်း ကို ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပင်လယ်ဓားပြတွေ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဆိုရင်တော့ ဘယ်အချက်တွေက ကွဲလွဲနေလဲဆိုတာ အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ပင်လယ် ဓားပြတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ပင်လယ် ဓားပြ သင်္ဘော ပေါ်ကို […]
September 29, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပုံမှန် အရွယ်အစားထက်ကြီးမားလွန်းနေတဲ့ အကောင်ကြီးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာ ဘယ်လို အကောင်တွေ ပါဝင်မလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ခွေးနဲ့ဝံပုလွေ မျိုးစပ်ထားတဲ့ အိမ်မွေးခွေး ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးချင်တာကတော့ Yuki အမည်ရှိ မျိုးစပ်ထားတဲ့ Wolfdog အမျိုးအစား ခွေးကြီး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီခွေးကြီးရဲ့ […]
September 28, 2021 Yan Comments Off on ချောက်ကမ်းပါး ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများ
ပရိသတ်ကြီး ဒီတစ်ခါ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ချောက်ကမ်းပါး ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆောက်လုပ်ရေး ဗိသုကာ ပညာရှင်တွေဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ပထဝီဝင် အနေအထား တစ်ခုမှာ ဘယ်လိုပုံစံ နဲ့ ရအောင် ဖန်တီး တည်ဆောက်ပြသွားလဲ ဆိုတာ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ မြစ်ရဲ့ အလှအပကို ခံစားနိုင်ဖို့အတွက် […]
September 25, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အနာဂတ်မှာ လူတွေ မိုးပေါ်ပျံသန်းဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ စက်ပစ္စည်းနှင့် ဝတ်စုံများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူသားတွေအတွက် အနာဂတ်မှည သွားလာရေး ပိုအဆင်ပြေအောင် ဘယ်လို စက်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ အလားအလာ ရှိလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Hoverbike တစ်ခြား ပျံသန်းနိုင်တဲ့ မော်တော် ဆိုင်ကယ်တွေလိုပဲ […]
September 24, 2021 Yan 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ တော်ရုံတန်ရုံ သတ္တိရှိသူတွေ မစီးရဲကြတဲ့ ရိုလာကိုစတာတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို ရိုလာကိုစတာတွေက စီးဖို့တောင် ကြောက်စရာကောင်းနေလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Outlaw Run ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ Outlaw Run လို့ ခေါ်တဲ့ ရိုလာကိုစတာ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ […]